पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा ‘तीन’ प्रमुख फेरियो, पुनर्निर्माण १०प्रतिशत मात्रै किन ? – Businesssansar
पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा ‘तीन’ प्रमुख फेरियो, पुनर्निर्माण १०प्रतिशत मात्रै किन ?
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई गति दिन सरकारले गठन गरेको पुनर्निर्माण प्राधिकरणले दुई वर्ष पूरा गरेको छ । तर, पुनर्निर्माणले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । हालसम्म भूकम्पले भत्काएका १० प्रतिशत घर मात्र तयार भएका छन् ।१२ वैशाख ०७२ को भूकम्पबाट सात लाख ६७ हजार सात सय पाँच वटा निजी घरमा क्षति पुगेको थियो । प्राधिकरणका अनुसार क्षतिग्रस्त ती घरमध्ये हालसम्म ७९ हजार चार सय ४२ को निर्माण सकिएको छ ।एक लाखले पहिलो किस्ता नै पाएनन्
भूकम्प गएको अढाइ वर्षभन्दा लामो समय बितिसक्दा एक लाखभन्दा बढी पीडितले पहिलो किस्तावापतको अनुदान रकम पाउन सकेका छैनन् । हालसम्म ६ लाख ५३ हजार सात सय ४४ ले मात्र पहिलो किस्ता बुझेका छन् ।
प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म ६ लाख ६८ हजार एक सय ३२ पीडितसँग अनुदान सम्झौता भएको छ । तीमध्ये दोस्रो किस्ता पाउने लाभग्राहीको संख्या एक लाख ३९ हजार एक सय ७० छ । यस्तै, तेस्रो किस्ता पाउने लाभग्राहीको संख्या ३८ हजार आठ सय ५० मात्र छ ।
एक लाख ९३ हजार ६ सय ४१ निजी घर निर्माणको चरणमा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
जबकि, गत मंसिरभित्रमा पहिलो किस्ता उपलब्ध गराइसक्ने सरकारी लक्ष्य थियो । अझै पनि ठूलो संख्याका पीडितले जग खन्ने पैसासमेत पाउन सकेका छैनन् । आगामी चैतसम्म दोस्रो र असारसम्म तेस्रो किस्तावापतको अनुदान उपलब्ध गराउने दाबी प्राधिकरणको छ ।
सार्वजनिक संस्था र सांस्कृतिक सम्पदाको पुनर्निर्माण न्यून
Posted in अर्थ विचार
मनकामना मन्दिरको छानामा १८ केजी सुनकाे जलप लगाइने
सार्वजनिक स्थानमा फोहोर फाल्ने गर्नुहुन्छ ? साबधान अब कार्बाहिमा पर्नुहोला